धर्मशास्त्रले महिला पास्टरको बिषयमा के भन्छ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – चर्चमा आज महिलाहरूले पास्टरको भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ कि हुदैन भन्ने बिषयमा चर्को विवाद हुदै गइरहेको छ। नतिजाको रूपमा, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि यो मुद्दालाई पुरुष र महिलाको रूपमा हेर्नु हुँदैन। त्यहाँ महिलाहरू छन् जसले विश्वास गर्छन् कि महिलाहरूले पास्टरको रूपमा सेवा गर्नु हुँदैन र बाइबलले महिला पास्टरको सेवाकार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, र त्यहाँ पुरुषहरू छन् जसले विश्वास गर्छन् कि महिलाहरूले पास्टरका रूपमा सेवा दिन सक्दछन् र महिलाहरूलाई पास्टरिय सेवकाईमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। यो कुनै पुरुष र महिला विचको भेदभाव को मुद्दा नभई यो बाइबलीय व्याख्या को एक मुद्दा छ।
परमेश्वरको वचनले यो घोषणा गर्दछ, “स्‍त्रीले पूर्ण दीनतासाथ चूपचाप बसेर सिकून्‌। तर स्‍त्रीले पुरुषलाई सिकाउने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउने काममा म अनुमति दिन्‍नँ, तर तिनी चूपचापै रहून्‌”(१ तिमोथी २:११-१२)। चर्चमा, परमेश्वरले महिला र पुरुषलाई फरक भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यो मानिसजातिको सृष्टि र संसारमा पाप प्रवेश गरेको परिणाम हो (१ तिमोथी २:१३-१४)। प्रेरित पावलमार्फत परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई सिकाउने भूमिकामा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्छ र पुरुषमाथि आध्यात्मिक अख्तियार जमाउनमा पनि । यसले गर्दा महिलालाई पुरुषहरूमाथि पास्टरको रूपमा सेवा गर्न निषेध गर्दछ, जसमा निश्चित रूपमा उनीहरूलाई प्रचार गर्ने, सार्वजनिक रूपमा सिकाउने, र उनीहरूमाथि आध्यात्मिक अधिकार प्रयोग गर्ने समावेश छ।
पास्टरिय सेवकाईको विषयमा महिलाहरूले यो दृष्टिकोणलाई धेरै आपत्तिको रुपमा लिएकाछन्। एउटा साधारण कुरा यो हो कि पावलले महिलाहरूलाई सिकाउन प्रतिबन्ध लगाए किनभने प्रथम शताब्दीमा महिलाहरू खास गरी अशिक्षित थिए। तर १ तिमोथी २:११-१४ मा कतै पनि शैक्षिक स्थितिलाई उल्लेख गरिएको छैन। यदि शिक्षा सेवाको लागि योग्यता भएको भए, येशूका अधिकांश चेलाहरू योग्य हुँदैनथे। दोस्रो साझा आपत्ति यो हो कि पावलले एफिससका आइमाईहरूलाई मात्र पुरुषहरूलाई सिकाउन प्रतिबन्ध लगाए (१ तिमोथीको पत्र एफिससको चर्चका पादरी तिमोथीलाई लेखिएको थियो)। एफिसस आर्तेमस मन्दिरको लागि चिनिन्थ्यो, र मूर्तिपूजाको त्यो शाखामा महिला अधिकारीहरू थिए। त्यसैले यो सिद्धान्तले देखाउँदछ, कि एफिसियन मूर्तिपूजकहरूको महिला नेतृत्वमा चल्दै आएको कुराको विरुद्धमा पावलले केवल प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका थिए र चर्च पनि फरक हुनु आवश्यक थियो। यद्यपि १ तिमोथीको पुस्तकमा कतै पनि आर्तेमसको उल्लेख गरिएको छैन, न त पावलले १ तिमोथी २:११-१२ मा प्रतिबन्धको कारणको रूपमा आर्तेमस उपासकहरूको अभ्यासको उल्लेख गरे।
तेस्रो आपत्ति यो हो कि पावल केवल पति र पत्नीहरूलाई मात्र उल्लेख गर्दै थिए, साधारणतया पुरुष र महिलालाई होइन। १ तिमोथी २ मा “स्त्री” र “पुरुष” को लागि ग्रीक शब्दले पति र पत्नीहरूलाई बुझाउन सक्दछ; यद्यपि, शब्दहरूको मूल अर्थ त्यो भन्दा फराकिलो छ। यसबाहेक, युनानी शब्दहरू ८–१० पदमा प्रयोग गरिएको छ। के केवल पतिहरूले रिस र झगडाविना प्रार्थनामा पवित्र हात उठाउन सक्छन् (पद ८)? के केवल पत्नीहरूले भद्र पहिरन लगाउँदछन्, असल कामहरू गर्छन्, र परमेश्वरको आराधना गर्छन् (पद ९ -१०)? पद ८-१० ले स्पष्ट रूपमा सबै पुरुष र महिलालाई जनाउँदछ, केवल पति र पत्नीहरूलाई मात्र होईन। यस सन्दर्भमा केहि पनि छैन जुन पद ११-१४ मा पति र पत्नीहरूको लागि साँघुरो हुने संकेत गर्दछ।
पास्टरिय सेवकाईमा महिलाको यो व्याख्याको बारेमा अर्को आपत्ति बाइबलमा नेतृत्व लिने ओहदाको लागि विशेष गरी मिरियम, दबोरा र हुल्दाको सम्बन्धमा रहेको छ। यो सत्य हो कि यी महिलाहरू परमेश्वोरद्वारा विशेष सेवाको लागि परमेश्वरले चुन्नुभएको थियो र तिनीहरू विश्वास, साहस, र काममा, नेतृत्वको उदाहरणको रूपमा खडा छन्। यद्यपि, पुरानो नियममा महिलाहरूको अधिकार चर्चमा पास्टरहरूको सवालमा प्रासंगिक छैन। नयाँ नियमका पत्रहरूमा परमेश्वरका मानिसहरूका लागि एउटा नयाँ प्रतिमान प्रस्तुत गरिएको छ – चर्च, ख्रीष्टको शरीर – र त्यो उदाहरणले चर्चको लागि अद्वितीय अधिकार संरचना समावेश गर्दछ, इस्राएल राष्ट्र वा कुनै अन्य पुरानो नियमको अस्तित्वको लागि होईन।
यी दिनहरूमा महिलाहरूले नयाँ नियममा भएका प्रिस्किल्ला र फोबीको प्रयोग गरेर यस्तै तर्कहरू गरिरहेकाछन । प्रेरित १८ मा प्रिस्किला र अक्वीलालाई ख्रीष्टका विश्वासी सेवकहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रिस्किल्लाको नाम सर्वप्रथम उल्लेख गरिएको छ, सायद यो दर्शाउँछ कि उनी आफ्नो पति भन्दा अघि सेवकाईमा बढी प्रख्यात थिईन्। के प्रिस्किल्ला र उनको पतिले अपोल्लसलाई येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सिकाए? हो, उनीहरूको घरमा उनीहरूले उनलाई “परमेश्‍वरका मार्गको अर्थ झन्‌ प्रष्‍टसँग बुझाइदिए” (प्रेरित १८:२६)। के बाइबलले कहिल्यै भन्छ कि प्रिस्किलाले चर्चलाई नेतृत्व गरेको थियो र सार्वजनिक रूपमा सिकाएको थियो वा सन्तहरूको मण्डलीको आत्मिक नेता बनेको थियो भनेर ? अहँ, जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, प्रिस्किला सेवकाई गतिविधिमा १ तिमोथी २:११-१४ को विरोधाभासमा संलग्न थिएनन्।
रोमी १६:१ मा, फोबीलाई चर्चमा “डिकन” (वा “नोकर”) भनिएको छ र जुन कुरालाई पावलले कडा रुपमा आज्ञा दीएको छ। तर प्रिस्किलाले जस्तै फिबी चर्चमा पास्टर वा पुरुषका शिक्षक थिए भनेर संकेत गर्ने त्यहाँ कुनै कुरा छैन। “सिकाउन सक्षम” एल्डरहरूको योग्यताका रूपमा दिइन्छ, तर डिकनहरूको लागि होइन (१ तिमोथी ३:१-१३; तीतस १:६–९)।
१ तिमोथी २:११-१४ को संरचनाले महिला पास्टर हुन नसक्नुको कारणलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्दछ। पद १३ ले यसको कारण बताउदछ र पद ११–१२ मा पावलको भनाइलाई “कारण” दिनबाट शुरू हुन्छ। किन महिलाले पुरुषलाई सिकाउने वा अधिकार राख्न हुन्न? किनभने “आदम पहिले सृजिएका हुन्, त्‍यसपछि हव्‍वा। आदम धोकामा परेको थिएन। धोकामा परेकी स्त्री थिइन् “(पद १३–१४)। परमेश्वरले आदमलाई पहिले सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि हव्वालाई आदमको लागि “सहयोगी” हुन बनाउनुभयो। सृष्टिको क्रम परिवारमा र (एफिसी ५:२२–२३) मा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
हव्वालाई धोका दिइयो भन्ने तथ्य १ तिमोथी २:१४ अनुसार महिलाहरूले पास्टरको रूपमा सेवा नगर्न वा पुरुषमाथि आध्यात्मिक अधिकार नराख्न कारण पनि दिइएको छ। यसको मतलब यो होइन कि पुरुषहरू भन्दा महिलाहरू दोषी छन् वा तिनीहरू सबै भन्दा सजिलै धोका दिइन्छ । यदि सबै महिलाहरू सजिलै ठगिन्छन् भने तिनीहरूलाई किन बच्चाहरू र अन्य आइमाईहरूलाइ सिकाउन अनुमति दिइन्छ? उक्त पदले केवल यो कुरा भनेको छ कि महिलाहरूले पुरुषलाई सिकाउन वा पुरुषमाथि आध्यात्मिक अधिकार राख्नु हुँदैन किनभने हव्वा बहकाउमा परेको थियो।
परमेश्वरले पुरुषहरूलाई चर्चमा प्राथमिक शिक्षा दिने अधिकारको निम्ति रोज्नुभएको छ। धेरै महिलाहरु अतिथि सत्कार, दया, सिकाउने, प्रचारप्रसार, र सहयोग / सेवाको काममा उत्कृष्ट हुन्छन्। स्थानीय चर्चको धेरैजसो सेवकाई महिलाहरूमा निर्भर गर्दछ। चर्चका महिलाहरूलाई सार्वजनिक ठाउमा प्रार्थना गर्ने वा भविष्यवाणी गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन (१ कोरिन्थी ११:५), ले बताए अनुसार केवल पुरुषहरूमाथि आध्यात्मिक शिक्षा दिने अधिकारबाट हो । बाइबलले कतै पनि महिलाहरूलाई पवित्र आत्माको वरदान प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन (१ कोरिन्थी १२)। पुरुषहरू जत्तिकै अरूलाई पनि अरूको सेवाको निम्ति बोलाइएको हुन्छ, आत्माको फल प्रदर्शन गर्न (गलाती 5:२२-२३), र हराएकालाई सुसमाचार घोषणा गर्न (मत्ती २८:१८–२०; प्रेरित १:८; १ पत्रुस ३:१५)।
त्यसैले चर्चमा आत्मिक शिक्षा सिकाउने अधिकारीको पदमा पुरुषहरू मात्र सेवा गर्नुपर्दछ भनेर परमेश्वरले तोक्नुभएको छ। यो होइन कि पुरुषहरू आवश्यक रूपमा राम्रो शिक्षकहरू हुन्छन् किनभने महिला कम बौद्धिक हुन्छ (यो कुरा पटक्कै होईन)। यो केवल परमेश्वोरले चर्चमा कार्य गर्न डिजाइन गर्नुभएको तरिका हो। पुरुषहरूले आत्मिक नेतृत्वमा उदाहरण बसाल्नुपर्दछ – तिनीहरूको जीवन र उनीहरूको वचनबाट। महिलाहरूले कम आधिकारिक भूमिका लिनुपर्दछ। महिलाहरुलाई अरु महिलाहरुलाई सिकाउन हौसला दिइन्छ (तीतस २:३ –५) बाइबलले महिलाहरुलाई बच्चाहरूलाई सिकाउन प्रतिबन्ध लगाउँदैन। केवल केहि गतिविधिमा महिलाहरू प्रतिबन्धित छन् पुरुषहरूमाथि सिकाउने वा आध्यात्मिक अधिकारको कुरामा । यसले महिलालाई पुरुषमा पास्टरको रूपमा सेवा गर्नबाट वञ्चित गर्दछ। यसले महिलाहरूलाई कुनै पनि हिसाबले कम महत्त्वको बनाउँदैन, बरु उनीहरूलाई परमेश्वरको योजना र उनीहरूको वरदानलाई अनुमोदन गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्दछ।
उहाँ कृपालु हृदयमा हुनुहुन्छ।